Izy dia anisan’ireo maintimolaly eo amin’ny tontolon’ny baolina kitra tao Matsiatra Ambony ka tsy zoviana amin’ny rehetra ao Fianarantsoa. Efa filohan'ny Seksion'ny Baolina kitra izy Fianarantsoa I tamin’ny fotoanandrony,efa mpikambana teo anivon'ny LFB HM teo aloha sy izay mijoro amin'izao fotoana izao. Namela mamy ho an'ny Baolina kitra eto Fianarantsoa ny tenany tamin'ireo andraikitra nosahaniny ka hisaoran’ny ekipa rehetra ao amin'ny Ligim-paritry Baolina kitra Matsiatra Ambony izay tarihin'ny Filoha Ramatoa Myriame Raby izay asa rehetra vitany. Misaona , araka izany ny baolina kitra ao Matsiatra Ambony sy ny tontolon’ny baolina kitra amin’ny ankapobeny. Izahy eo amin’ny Tia Tanindrazana dia mirary fampiononana feno ary mankahery ihany ny fianakaviany.